हरिवंश मामाघरमा- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
अभिनेता हरिवंश आचार्य भन्छन्– नेपाली कलाकारका लागि प्रवास अहिले माया, सम्मान र श्रद्धा पाउने थलो बनेको छ ।
कार्तिक १६, २०७५ नारायण खडका
अस्ट्रेलिया — चाडपर्व आयो कि कलाकारलाई दसैं लागेझैं हुन्छ  । अझ दसैं–तिहारको चटारो त बेग्लै ! बाहिरका नेपालीहरू आफन्त मिलनको चाह बोकेर मुलुक फिरिरहेका बेला कलाकर्मी भने कन्सर्ट या सांस्कृतिक प्रस्तुतिका लागि विदेश उडिरहेका हुन्छन्  ।
अभिनेता हरिवंश आचार्य पनि दसैंलगत्तै अस्ट्रेलिया आइपुगे, कला प्रस्तुतिका लागि नभई निजी भ्रमणमा । तर, उनको अस्ट्रेलिया बसाइ थाहा पाएपछि के फुर्सद मिल्थ्यो ! सबै राज्यमा रहेका नेपालीहरूले भेटघाट, अन्तरक्रिया र कला प्रस्तुतिका लागि बोलाउन थालिहाले ।
‘मामाघर आकोजस्तो भयो नि !’ उनले भने, ‘नेपाली कलाकारका लागि प्रवास अहिले माया, सम्मान र श्रद्धा पाउने थलो बनेको छ ।’ यति बेला उनी भेटघाटसँगै आफ्नो लेखन तथा कलाकारिताबारे अन्तरक्रिया मात्रै हैन, आफूले हालै सिर्जेको ‘जँडयाहा’ को एकल रंगमञ्चीय प्रस्तुतिसमेत दिइरहेका छन् ।
जाँडरक्सीका प्रभाव र असरमाथिको उक्त सन्देशमूलक नाटकले दक्षिणी अस्ट्रेलियामा दर्शकबाट निकै प्रशंसा पायो । यससँगै उनका छोटामीठा प्रहसन र कलाकारिताको संघर्षको कथा रोचक र मन छुने थिए ।
केही वर्षअघि आफ्ना जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठसहित महसञ्चारको टिम लिएर युरोप र अमेरिकाको कला यात्रा गरेका उनले पछिल्लो समय नेपाली डायस्पोरामा विकास भएको सांस्कृतिक चेतनाको प्रशंसा गरे । ‘कलाकारका लागि विदेशका नेपाली दर्शकश्रोताहरू ज्युँदो भगवान् जस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘विदेशमा पाइने माया मामाघरमा पाइने मायाभन्दा कम छैन ।’
उनका अनुसार, हरेक कलाकारका लागि दर्शकश्रोता भगवान् जस्तै हुन्छन् । ‘त्यसैले पनि मलाई नेपालीहरूसमक्ष पुग्दा मन्दिर गएको अनुभव हुन्छ किनकि मन्दिरको देवता आस्था हो भने दर्शकश्रोता साक्षात् भगवान् हुन्,’ उनले भने । विदेश र कलाकारबीचको सम्बन्धलाई उनले माइती–चेलीको सम्बन्धको रूपमा समेत व्याख्या गरे ।
‘हरेक पटक विदेश आउँदा श्रीमान्को घरबाट माइती आएकी चेलीजस्तै माया पाउँछु म,’ उनले भने । अस्ट्रेलियामा रहेको बेला उनी सिड्नी लगायत केही सहरमा नेपालीहरूले गरेका विभिन्न अन्तरक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि उनले आफ्ना ‘म’ अर्थात् मदनकृष्णलाई हरेक पटक सम्झिरहेका छन् । ‘हामीले सँगै काम गरेको दशकौं भइसकेकाले पनि मदन दाइ मेरो जीवनको अभिन्न अंग जस्तै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हरेक स्थानमा उहाँको अभाव खड्कने गर्छ ।’
कुराकानीका क्रममा आचार्यले अहिले अस्ट्रेलियाको बजार नेपाली कलाकारका लागि तेस्रो ठूलो बजार भएको बताउँदै विदेशी बजारलाई आकर्षण गर्न नेपाली कलाकार पनि उत्तिकै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने सुझाए ।
निजी भ्रमणमा सुटुक्क आएको पनि भए पनि यस पटक उनी प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरूलाई आयोजकले सामाजिक सेवासँग पनि जोडेका छन् । उठेको रकम नेपालस्थित मानव सेवा आश्रम र स्थानीय केही सामाजिक संस्थाहरूलाई सहयोगस्वरूप हस्तान्तरण गरिने आयोजकले दाबी गरेको छ । कार्यक्रमको आकर्षण भने हास्य अनुभव र सोलो नाटक मात्रै बनिरहेको छैन, आत्मकथा ‘चिना हराएको मान्छे’ र उपन्यास ‘हरिबहादुर’ अर्को आकर्षण बनेको छ । उनको हस्ताक्षरसहित किन्नेहरू उत्तिकै भेटिन्छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७५ ०८:४७
आश्विन ३०, २०७५ नारायण खडका
अष्ट्रेलिया — शनिबार अष्ट्रेलियाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । उक्त क्षेत्रमा हुने नतिजाले अष्ट्रेलियाको राजनीति र संसदलाई अस्थिर बनाउन सक्ने भएकाले पनि उक्त निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
पुर्व प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले पद त्यागेर राजनीतिबाटै सन्यास लिएपछि सिड्नीस्थित उनको निर्वाचन क्षेत्र वेन्टवर्थमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यस निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले सरकारमा रहेको दल लिबरलबाट भारतीय मुलका देव शर्मा, बिपक्षी दल लेबरका टिम मुर्रे र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. केरिन फेल्प्स उम्मेदवार छन् । अहिले सरकारमा झिनो बहुमतका साथ रहेको लिबरलले यदी यो निर्वाचनमा पराजय भोगेमा आफ्नो बहुमत गुमाउनेछ भने स्वतन्त्रबाट समर्थन नपाएमा संसद र राजनीति अस्थिर बढ्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले पनि यस निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनलगायतका ठुला नेताहरु आफ्नो दललाई जीत दिलाउन लागि परेका छन् ।
पुर्व प्रधानमन्त्री टर्नबुलले १४ वर्षसम्म यसै क्षेत्रबाट राजनीति गरेका थिए । टर्नबुलको राम्रो पकड रहेको उक्त क्षेत्रमा उनले आफ्नो दलको उम्मेदवारको पक्षमा केही नबोलेका कारण समेत समस्या सृजना भएको बिष्लेषण गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको राजनीति बुझेका डा. भरतराज पौडेल जम्मा १ सिटको बहुमत रहेको अहिलेको सरकारका उम्मेदवारले हार ब्योहोर्नुपरे संसद, सरकार र राजनीति अस्थिर बन्ने र प्रधानमन्त्री बाध्य भएर कुनैपनि बेला निर्वाचनमा जान सक्ने बिष्लेषण गर्छन् । उनी आफ्नो उम्मेदवार जिताउन लिबरलका नेताहरुले टर्नबुललाई आग्रह गरिरहेको भएपनि उनले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । १४ वर्षसम्म एक्लै जित हासिल गरेका टर्नबुलले उम्मेदवारको समर्थनमा बोलिदिए जित हासिल गर्ने दाबी उनको छ ।
अष्ट्रेलियाको राजनीति लिबरलमा आएको पद र नेतृत्व प्राप्तिको लडाईसँगै पछिल्लो समयमा रोचक बनिरहेको छ । पिटर डट्टनलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा हराएर पद हासिल गर्न सफल मरिसनलाई यो निर्वाचन प्रतिष्ठाको बिषय बनेको छ । अर्कोतिर स्वतन्त्र उम्मेदवार फेल्प्सले आफुले जीत हासिल गरे सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएकी भएपनि उनको समर्थन सरकारले ल्याउने भावी नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्भर रहने बताइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा संसदीय निर्वाचन हुन केही महिना मात्र बाँकी रहेको सन्दर्भमा भइरहेको यो उपनिर्वाचनले आउँदो मे पछि हुने निर्वाचनमा समेत असर पर्ने बिष्लेषण गरिएको छ । अर्कोतिर केही समयपहिले भएका ५ वटै उपनिर्वाचनमा बिपक्षी दल लेबरले जित हासिल गरेकाले समेत यो उपनिर्वाचन लिबरललाई प्रतिष्ठाको बिषय बनेको हो ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ १५:४८
पर्यटक पठाउन जुट्दै बेलायतस्थित नेपाली
लगानी सम्मेलनमा ओमनको सहभागिता रहने
साताको साहित्य पुरस्कार कवि प्यासीलाई दिइने
अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थी समेट्ने एनआरएनको प्रयास
राजदूत शेर्पा अस्ट्रेलियामा